Fikarohana momba ny firaisana Trangam-panjakan'olo-tokana nataon'i Gustav Mahler | Peter Gabriel - Fikarohana momba ny vatana teraka
Peter Gabriel dia iray amin'ireo mpihira tiako indrindra. Mpankafy ny tarika aho Genesis, nefa tiako kokoa ny asa soloan'i Peter. Nandritra ny fivoriana niaraka tamin'i Kevin Ryerson, nanamafy i Ahtun Re fa i Petera no vatana vaovao ao amin'ny vatana vaovao Gustav Mahler.
Fitoviana ara-batana amin'ny fotoana iray amin'ny hafa: Ny endriky ny tarehin'i Gustav Mahler sy i Peter Gabriel dia tsy miova, indrindra fa amin'ny tanora.
Innate Past Life Talent: Ny talenta mozikan'i Mahler dia naseho tao amin'ireo hira sy mozika nataon'i Peter Gabriel.
Fiovan'ny Fivavahana, ny Nationality ary ny Fiaraha-monina Ethique avy amin'ny Fahatongavana ho nofo iray ho an'ny hafa: Teraka tamin'ny fianakaviana Alemana sy Jiosy i Gustav Mahler, saingy niova fo ho amin'ny Kristianisma izy mba hisorohana ny fanenjehana. Peter Gabriel, Anglisy iray, dia nobeazina tao amin'ny fianakaviana kristianina iray ary naneso, nanoratra ny mozika ho an'ilay sarimihetsika izy, Ny fakam-panahy farany an'i Kristy. Ity tranga ity, raha azo ekena, dia mampiseho fa ny zom-pirenena sy ny fivavahana dia afaka miova iray isaky ny androm-piainany.